Faah-faahin cusub iyo Wararkii ugu dambeeyay ismiidaamintii ka dhacday Isgoyska Baar Ismaaciil +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin cusub iyo Wararkii ugu dambeeyay ismiidaamintii ka dhacday Isgoyska Baar Ismaaciil...
Muqdisho (Halqaran.com) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin ahaa oo maanta lala beegsada gawaari ay la socdeen Injineerada Turkiga, ee gacanta ku haya dhismaha wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Nin la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa bartilmaameedsaday gaadiidka oo Injineerada ay la saarneyd askar ka tirsan Ciidamada Dowladda, oo ilaalo ahaan ula socotay.
Qaraxan ayaa lagula beegsaday agagaarka Isgoyska Baar Ismaaciil ee Degmada Afgooye.
Ugu yaraan saddex qof ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerarkaasi, halka in ka badan labaatan kalena ay ku dhaawacantay. Dadka dhintay ayaa ahaa askartii ilaalada u ahayd Injineerada.
Goobjooge ayaa sheegay in nin kaxeynayay gaari NOAH ahaa uu beegsaday illaa saddex gaari, kuwaa oo mid ka mida ay la socdeen Injineerada Turkiga, halka labada kalena ay askarta saarneyd.
Sida ay ku warantay Wakaaladda Wararka Turkiga ee Anadolu waxaa weerarka ku dhaawacmay afar ka mid ah Injineerada Turkiga u dhalatay, ee qandarasaaska lagu siiyay dhismaha wadada isu xirta Afgooye iyo Muqdisho.
Waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in tirada dadka Turkida ee ku dhaawacantay weerarkaasi ay ka badan yihiin tirada ay sheegtay Anadolu, isla-markaana uu dhaawacoodu sii caga cageynayo illaa lix qof, oo qaarkood ay xaaladoodu liidato.
Sidoo kale Warbaahinta gudaha ayaa tebisay in gaari homey ahaa oo ay la socdeen dad rakaab ah ay ku dhaawacantay weerarka. In ka badan toban qof oo rakaabka ka mid ahaa ayaana la xaqiijiyay inay dhaawac yihiin.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Mevlut Cavusoglu ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka argagixiso ee ka dhacay Isgoyska Baar Ismaaciil.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkan, iyagoona ku faanay in dhimasho iyo dhaawacba uu ka soo gaaray Injineerada Turkiga iyo askartii la socotay.
Waa weerarkii labaad oo wax ka yar bil gudaheed Injineerada Turkiga lagula beegsado Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo weerarkii 28-kii bishii December dhacay lagu dilay 87 qof, oo laba ka mida ay Turki ahayd.
Faah-faahin cusub iyo Wararkii ugu dambeeyay ismiidaamintii
Isgoyska Baar Ismaaciil
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga